दीपिका पादुकोणले गरी्न आफ्नो जन्मदिनमै १५ घण्टा काम, के काम थियो त्यस्तो ? | Artist Khabar
दीपिका पादुकोणले गरी्न आफ्नो जन्मदिनमै १५ घण्टा काम, के काम थियो त्यस्तो ?	पुस, मुम्बई । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले बिहिबार आफ्नो ३१ औं जन्मदिन मनाएकी छिन् । सन् १९८६ मा जन्मिएकी दीपिका यतिखेरकी बलिउडकी चर्चित नायिका हुन् । साथै उनले पछिल्लो समय हलिउडमा पनि काम गरीरहेकी छिन् ।
यसका साथै दीपिकाले आफ्नो जन्मदिनको दिन कुनै ठुलो पार्टि भने गरीनन् । उनले यसबर्षको आफ्नो जन्मदिन बिशेष भएको भन्दै बिशेष तरिकाले मनाइन् । उनले आफ्नो जन्मदिनमा पुरा १५ घण्टा काम गरीन् ।
के काम थियो त्यस्तो ?
दीपिकाले आफ्नो जन्मदिनमा आफुले अभिनय गरेको हलिउड चलचित्र xXx: Return of Xander Cage को प्रमोशनको लागी १५ घण्टा काम गरेकी हन् । उनको यस चलचित्र यहि १४ जनवरीमा प्रदर्शन हुँदैछ । चलचित्रमा एक अहम् भुमिका निभाएकी दीपिका यतिखेर चलचित्रको प्रमोशनका लागी मेक्सिकोमा छिन् । प्रमोशनमा उनको साथमा चलचित्रका आर्टिस्ट डीजल, रुबी रोस र चलचित्र युनिटनै रहेको छ ।